WordPress: Plugins SEO roa ho an'ny Famoronana Meta Tag | Martech Zone
WordPress: Plugins SEO roa ho an'ny Famoronana Meta Tag
Alarobia, Jolay 4, 2007 Alakamisy 31 martsa 2016 Douglas Karr
Nanoratra lahatsoratra roa samy hafa aho tamin'ny famolavolana ireo mari-pamantarana meta, teny lakile ary famaritana. Ny teny lakile dia tena hanampy amin'ny tranokalanao fahitana, fa ny famaritana dia hanampy ireo mpitsidika ny motera fikarohana amin'ny alàlan'ny fanolorana famaritana tsara kokoa.
Raha tokony handrindra ireo fanatsarana ireo araka ny natoroko anao ianao, dia misy plugins roa afaka manao ny asa ho anao.
Miaraka amin'ny Yoast SEO plugin azonao fehezina ny pejy asehon'i Google amin'ny valin'ny fikarohana sy ny pejy tsy asehony. Yoast dia tsy manampy anao fotsiny hanamboatra ireo famaritana meta, fa manome anao valiny momba ny fampiasanao teny lakile ary topi-maso tsara momba ny fijerin'ny pejinao ao amin'ny pejin'ny Valin'ny Search Engine.
Yoast koa dia manolotra safidy Plugins SEO Add-On Premium tena tiako koa izany.
Ireo rehetra izay iray SEO Pack
John Chow nanoro hevitra ny Plugin amin'ny fonosana SEO iray ihany fa tsy nijery tsara ilay plugin mihitsy aho raha tsy omaly alina. Menatra aho. Ny plugin dia manao asa mahafinaritra amin'ny fampiasana ny "Sombin-kevitra azo alaina" ao amin'ny WordPress ho toy ny famaritana ny pejy tokana anao.
Toy izao no fijerin'ny valin'ny motera fikarohana (azonao atao ny manindry ny sary raha hijery ny tena toerana):
Izany dia nilaza fa ny All in One SEO Pack dia manana asa lehibe amin'ny Tag Meta Famaritana, saingy tsy mino aho fa asa tsara toy izany amin'ny Tag Meta Keyword. Manokana ireo sokajy nofidinao ho teny lakile ho an'ny hafatrao fotsiny izy io, tsy dia ampy famaritana. Azonao atao ny mametraka teny fanalahidy fanampiny ho an'ilay lahatsoratra, saingy tsy ampiasaina amin'ny toerana hafa izy ireo.
Any no misy ny tolo-kevitro plugin manaraka, Ultimate Tag Warrior. Ity ny fomba ahazoana antoka fa tsy manoratra mari-pamantarana meta amin'ny teny lakile amin'ny alàlan'ny fonosana SEO iray ao anatin'ny iray ianao, ajanony ny safidy Ampiasao ny sokajy ho an'ny teny lakile META:
Ankehitriny isaky ny manoratra lahatsoratra bilaogy ianao, dia aza hadino ny mameno ny sahan-dahatsoratra Optional Excerpt miaraka amina fehezan-teny tsotra roa izay hitaona ireo mpikaroka maro hanindry ny lahatsoratrao:
Tags: rehetra ao anatin'ny iray amin'ireo seoMetameta descriptionmeta tagSEOyoast seo
Ny doka rohy an-tsoratra Dethrones Google Adsense (ao amin'ny bilaogiko)
4 Jolay: Tohano ny Fahafahana mitoraka bilaogy any Etazonia
Jul 9, 2007 amin'ny 7: 55 AM
Miombon-kevitra aminao momba ny fampifangaroana ireo plugins roa, Douglas. Vao haingana aho no nametraka ny All In One tamin'ny iray amin'ireo tranokalako ary plugin tsara izy io saingy, araka ny lazainao, ny singa fototra dia tsy ny lehibe indrindra. Rehefa voalaza fa ny tian'i Google dia tsy mametraka lanja be loatra amin'ny teny fanalahidy fa mifantoka amin'ny lohateny sy famaritana kosa.
Jolay 12, 2007 amin'ny 3:19 PM
Misaotra an'ity. Ny sombintsombiny azo atao dia zavatra efa nampiasaiko taloha fa tsy mahomby araka izay tratrako. Maro amin'ireo lahatsoratro malaza indrindra no tsy ampy sombiny.
Hiverina aho ary ho azoko antoka fa ny lahatsoratra 20 malaza indrindra dia manana ampahany mendrika, miampy ireo lahatsoratra vaovao soratako amin'ny ho avy. Hijery an'io plugin SEO io ​​ihany koa aho.
21 Aogositra 2007 à 1:52
> Tena mahagaga raha afaka mampitambatra ny lohany ireo mpanoratra roa ireo ary manambatra ny plugins roa ho iray.
Ny fonosana SEO dia afaka mampiasa marika avy amin'ny UTW ho teny fanalahidy raha mametraka an'io safidy io ianao, fa araka ny soso-kevitrao dia azonao atao ihany koa ny mamela ny UTW mitantana ireo teny fanalahidy meta. Araka ny fantatrao dia fin ny dikan-teny farany an'ny UTW, satria ny WordPress 2.3 dia hanana fanohanana tag naorina. Ny fonosana SEO dia mety hanohana ny lohatenin'ny tag tsy ho ela, miaraka amin'ny UTW sy WordPress 2.3. Raha manana fangatahana fampidirana fanampiny ianao dia ampahafantaro ahy.
14 Septambra 2007 à 7:40
Misaotra amin'ny soso-kevitra.
Tahaka ny olon-drehetra dia manana ireto plugins ireto ao amin'ny bilaogiko aho. Saingy toa manafoana izy ireo indraindray. Misaotra amin'ny fomba azo ampiharina amin'ny fampiarahana azy ireo.
Dec 16, 2007 amin'ny 10: 06 AM
Hevitra tsara momba izany. Ny meta tags dia ampahany manan-danja amin'ny fananganana tranokala mahomby sy mora amin'ny milina fikarohana.
Mampihomehy ny firesahana momba ny tenifototra meta teny fanalahidy. Toa mampiasa an'io daholo isika rehetra. Efa 10 taona mahery aho no nanatsara ny tranokala, avy any aoriana talohan'ny nahatsapanay fa nanao fanatsarana izahay! Fantatray ankehitriny fa ny motera lehibe dia tsy mijery akory ny teny fanalahidy…
Raha izany no izy, nahoana isika no mampiasa ny tenifototra meta? Ho an'ireo motera vitsivitsy any izay mbola mijery ny tenifototra? Fisalasalana izay mahazo fifamoivoizana be (raha misy mihitsy). Noho ny fomban-drazana? Angamba. Mahagaga fa mbola mampiasa azy ireo aho.
Dec 16, 2007 amin'ny 10: 44 AM
Ny teny fanalahidy meta dia mety tsy manan-danja ho an'ny motera lehibe, fa azo amboarina ho azy avy amin'ny marikao (izay manan-danja amin'ny fifamoivoizana). Ary ny famaritana meta dia afaka mampitombo ny CTR amin'ny fotoana lehibe.